YS-132NO / NC Ogologo ụdị ụdị ndị na-emepụta eletriki na ndị na - ebunye ya - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > > Mkpọchi eletrik > YS-132NO / NC Ogologo ụdị ọkụ eletrik
YS-132NO / NC Ogologo ụdị ọkụ eletrik
Mgba ọkụ eletrik na-abịa n'ọtụtụ ụdị. YS-132NO / NC bụ ọkụ eletrik nwere ihu ihu ogologo. O nwere uzo abuo: ida ida eletrik eletrik choro ike iji mechie ya. Failda ike eletrik na-akwụsị ịrụ ọrụ ọbụlagodi na enweghị ike.
Ọkụ eletrik na-abịa n'ọtụtụ dịgasị iche iche. YS-132NO / NC bụ ọkụ eletrik na ihu ihu ogologo. O nwere uzo abuo: ida ida eletrik eletrik choro ike iji mechie ya. Failda ike eletrik na-akwụsị ịrụ ọrụ ọbụlagodi na enweghị ike.
Aluminom, Igwe anaghị agba nchara kpọchie.
Ule na usoro 100000.
Elu-Oyi a na-ese, Inogide na Mara mma Nkeji edemede.
OA EC site na European Union, MA Asambodo site na China Ọfịs Nchedo Ọha.
Oke oke Oke Nkọwa
Mkpọchi Size 250Lx25Wx31H (mm)
Nhazi Stri Igwe anaghị agba nchara
Ijide Force 500kg
Voltaji DC12V (Iwu chọrọ DC24V)
Ugbu a 200mA (YS-132NO); 200MA (YS-132NC)
Njirimara Fail Secure (YS-132NO); Ada Ada (YS-132NC)
Adabara: Ọnụ ụzọ osisi, Metal Door, PVC Door
Okpomoku di n’elu N'ime + 20â „ƒ
Okpomọkụ dị mma -10 ~ + 55â „ƒ (14-131F)
Iru mmiri na-arụ ọrụ 0ï½ž95% (na-abụghị condensing)
Ihu efere Housinglọ Agba Agba
Ọrụ Wuru na-MOV
Nhọrọ Ngwa YS-308
Ibu ibu 0.4kg
Akwụkwọ CE-EMC CE-LVD FCC-VOC REACH WEEE
Tags na-ekpo ọkụ: YS-132NO / NC Ogologo ụdị eletriki eletriki, ndị na-emepụta, ndị na-eweta, Factlọ ọrụ, Nhazi, Bulk, Ihe Nlele efu, China, Mere na China, Ego, Zụta Ego, Ahịa, Ndepụta Ahịa, Nkwupụta, OA, ISO9001, Ogo
YS-130NO / NC Standard Type Electric tie
YS-130NO / NC-S -dị Electricdị Ọdụdọ Na ​​mgbama
YS-131NO / NC Warara-ụdị Electric Strike
YS-131NO / NC-S Warara-ụdị Electric Strike na mgbaàmà
YS-132NO / NC-S -dị ogologo ọkụ eletrik na mgbaàmà
YS-133NC ida Safe Electric Strike N'ihi Glass Door